Nhau - Cold inoshanda nzira yekugadzira aluminium poda uye kuti ungachengeta sei
Aluminium poda poda rudzi rwemakemikari mbishi zvinhu, izvo zvave zvichishandiswa zvakanyanya neanoenderana maindasitiri uye akaita basa rakakura. Aluminium poda ine zvakare zvimwe zvinodiwa pane zvainoita panguva yekugadzira, kazhinji vachishandisa mechina nzira uye inotonhora yekushanda nzira. Iyo inotonhora yekugadzirisa nzira inonyanya kuvimba nemarara aruminiyamu kuti ibudise aluminium poda, inova nharaunda uye inochengetedza simba. Chinyorwa ichi chichataura newe nezvenzira inotonhorera yekugadzira aluminium poda uye yekuchengetedza yealuminium poda yekunamatira kongiri ine mhepo.
One, matambudziko anoda kutariswa mukugadzirwa kwealuminium poda nekutonhora kushanda
Idzi dzinotevera nyaya dzinofanirwa kutariswa kune kana uchishandisa tekinoroji kuburitsa aruminiyamu poda nekutonhora kugadzira kwechimedu aruminiyamu.
1. Sangana nehunhu hwechigadzirwa uye huwandu hwezvinodiwa
Kutonhora kutonhora kwemarara aruminiyamu kwakanyanya kuomarara kupfuura simbi dzakajairika. Nekuda kwekuoma kwayo kwakadzika, kuomarara kwakanaka, uye nekukurumidza kupisa kwekupisa, zvinonetsa kugadzirisa. Inofanirwa kukundwa uye iwanikwe mune maitiro ehurongwa dhizaini uye dhizaini dhizaini kuti uwane icho chigadzirwa. Unhu zvinodiwa uye huwandu zvinodiwa.
2, chengetedza mari
Zvimedu zvealuminium marara ndeye indasitiri ine purofiti diki asi inokurumidza kubuda. Naizvozvo, zvinodikanwa kudzikisa mutengo kuti uwane purofiti iri nani. Mutengo wemidziyo, yekugadzira mitengo uye zvigadzirwa zvekutengesa mitengo inofanirwa kutariswa.
3. Deredza iyo mota inokwanisa yeiyo yose yekugadzira tambo
Kushandiswa kwemagetsi ndeimwe yemitengo yakakosha yekugadzira yealuminium poda inogadzirwa nesarufa yealuminium, iyo inokanganisa musika makwikwi ezvigadzirwa uye nezvakanaka zvehupfumi zvemabhizinesi. Naizvozvo, pane fungidziro yekuona kuti mhando yechigadzirwa uye huwandu hwezvinodiwa zvasangana, mafambiro ekuyerera akareruka uye maitiro neakawandisa kushanda uye kushomeka kwesimba kwesimba kunosarudzwa.
2. Aluminium poda poda, aluminium poda fekitori, aerated kongiri gasi inogadzira aluminium poda, aerated kongiri gasi inogadzira mumiriri
Nyaya dzinoda kutariswa mukuchengetwa kwealuminium poda yekunamatira kongiri ine mhepo.
1. Chigadzirwa chinofanira kuchengetwa mudura rakaoma, rine mweya uye rinotonhorera.
2. Inofanirwa kusarudzika kubva kumvura, asidhi, alkali, zvigadzirwa zvinokanganisa, sosi inopisa, sosi yemoto, nezvimwe.
3. Chigadzirwa chinofanira kushandiswa nekukurumidza mushure mekushandisa, uye chinofanira kuvharwa munguva mushure mekuchiburitsa kunze kuti zvidzivise kusanganisa mamwe ma reactant.
4. Nguva yekuchengetera yealuminium poda peta ndeye 6-12 mwedzi.
Iyo aluminium poda poda inogadzirwa nekambani yedu yanga ichishandiswa nevashandisi vazhinji kuti vataure kuti mhando ndeyechokwadi. Iyo aerated kongiri matombo anogadzirwa nayo ane yunifomu pores uye simba rekumanikidza rinosangana nenyika zviyero. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve aluminium poda kana uchida kuitenga, unogona kutitevera. Noushamwari shamwari dzinobva kwakasiyana mafambiro ekushanyira pamwe nekushandira pamwe nekukura pamwechete.